Ny sangan'asa lehibe indrindra | Martech Zone
Ny sangan'asa lehibe indrindra amiko
Talata, May 22, 2007 Wednesday, May 23, 2007 Douglas Karr
Ny namako akaiky indrindra dia mahatakatra ny hafaliako amin'ny asa-tanako. Mila milaza aminao aho fa na miezaka mafy manatsara ny tenako aza amin'ny tetikasa, asa, asa… dia tsy misy dikany raha ampitahaina amin'izay ananako ao an-trano, anaka. Bill sy Katie zanany vavy. Raha nihaona tamin'ny anjarako rahampitso aho dia hiala amin'ity tontolo ity hahafantatra fa namela zazalahy kely sy tovovavy tanora manan-talenta, faly, tsy tia tena, be fitiavana, marina, ary miasa mafy aho.
Gaga ahy ny zanako lahy isaky ny mandray gitara, mikrô, na mampifangaro ny mozikany samirery amin'ny solosainy. Manomboka amin'ny IUPUI, mandray mari-pahaizana Fizika ary mety tsy ampy taona izy amin'ny faritra rehetra, anisan'izany ny Frantsay, ny Injeniera Acoustical, na ny Siansa Politika. Mila mihaino ny sasany ianao ny mozikany eo amin'ny tranokalany henoko ny talentany, fa heveriko fa hanaiky ianao.
Isaky ny faran'ny herinandro na mihoatra dia mandany fotoana ankamamiana miaraka amin'ny reniny ireo ankizy. Na dia efa nisara-panambadiana nandritra ny 5 taona mahery aza izahay, dia fifandraisana tsara izay ananantsika rehetra ary ny tsirairay amintsika dia mifanaja fatratra. Tsy tokony handre antsika miady mihitsy ny ankizy, satria ny tanjontsika dia ny hahasambatra sy hanao izay azontsika atao mba hahatanteraka izany.
Ohatra iray, nandidy karatra fizarana diplaoma aho mba hanangonan'i Bill vola ho azy any amin'ny oniversite. Mila fiara izy ary mila vola kely ho an'ny boky, heveriko fa tsy hiala amin'ny fampianarana izy fa mety mbola mindrana ihany. Ho hitantsika eo. Na izany na tsy izany, ny reniny dia nandefa ny fanambarana rehetra tany amin'ny fianakaviany sy ny namany ary ny fianakaviako sy ny namako. Tsara be izany. (Ho an'ireo ray aman-dreny misara-panambadiana na efa nisara-bady… MOMBA AN'NY ZANAKELY!)
Nandany ny fiara 45 minitra nihira ny atidohanay izahay. Ny olona mitondra fiara dia tsy maintsy mieritreritra fa adala isika ary ilay vahiny tsy fahita firy amin'ny fiara matetika dia mitsambikina miaraka amin'ilay fampisehoana miaraka amintsika. Ny ankafizinay dia ny Bat out of Hell avy amin'i Meatloaf… saingy mihaino sy mihira amin'ny zavatra rehetra izahay. Misy gara 70 sy 80 mpivady eny an-dalana ka tsy misy ferana.
Ary rehefa mihira isika dia ataontsika ao daholo ny zava-drehetra… arakaraka ny fandehanan'ny teatra sy ny fidradradradrana an-tsofina no vao mainka tsara kokoa. (Manelingelina ny fihirana tsindraindray izahay noho ny lalao tiako indrindra, "Vinavinanao izany" roadkill "). Amin'ny fotoana ahatongavantsika amin'ny Exit 50B, matetika isika tsy miaina, tsy misy feo ary mihomehy toa adala.
Volana roa lasa izay, nandray anjara tamin'ny fifaninanana fihirana Indiana tany Bloomington ny zanako vavy. Saika loza iray - nidina ny lakile voalohany ary nanadino ilay hira manontolo i Katie. Nitomany izy, namorona ny tenany ary nanomboka nihira indray. Tsy nanampy azy aho - fantatro fa tsy maintsy nisintona niverina izy (fa zazalahy no namihina anay taorian'ny nahavitany). Katie dia nanao asa tsara ary nahazo ny volamena.
Anio alina dia ny Kaonseritra lohataona tao amin'ny Greenwood Middle School ho an'ny mpihira kilasy faha-6, faha-7 ary faha-8. Katie dia nanana solo, "Portrait in Blue" ary efa nihira azy nandritra ny iray volana nanodidina ny trano. Nomeko torohevitra kely iray izy talohan'ny nandehanany androany alina - mitadiava toerana ary hibanjina azy. Nisy ray aman-dreny sy mpianatra roanjato tao amin'ny kaonseritra androany alina ka fantatro fa ho sahiran-tsaina izy. Talohan'ny nanohizany dia nilaza tamiko izy fa nihira ilay hira ho ahy izy.
Nieritreritra momba an'i Katie tontolo andro aho androany ary ny fahombiazany. Ary zazalahy, moa ve izy! Nikotrokotroka ny solo irery tao amin'ny gym ary nitodika ny lohan'ny vahoaka. Tsy manana fakantsary fakan-tsary tena tsara aho fa namoaka ny findaiko fakan-tsary PDA ary nandrakitra ny hetsika. Miala tsiny aho fa mahatsiravina ny kalitao ary tsy dia mafy ny feo, fa azonao antoka fa henonao i Katie mihira ny manga.
Mandainga aho raha milaza fa tsy misy tomany. Tsy azoko lazaina amin'ny teny ny fomba mampino azy. Ny olona nanodidina ahy dia nitodika ka nanao hoe: "Zanakavavinao ve izany? Tsara be izy! ”. Nijery indray an'i Katie aho ary hitako ny hafaliany. Ny zanako no sangan'asa lehibe indrindra amiko.
Tsy hisy hanakaiky mihitsy.
WordPress: Ataovy miavaka ny CSS raha navoaka anio ny lahatsoratra
Amin'ny ambaratonga Geek, isao ity!
May 23, 2007 amin'ny 3: 05 AM
Lahatsoratra tsara Doug! Vakio hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dimy ambony ka hatramin'ny Katie!
May 23, 2007 amin'ny 8: 43 AM
Misaotra, Tony. Papa reharehako ry Papa a!
May 23, 2007 amin'ny 3: 45 AM
Mahagaga fotsiny ny fitomboan'ny ankizy haingana.
Ary toy ny teny notsongaina tamin'ity andro ity: "Ny fiankinan-doha no inoan'ny ray aman-dreny manan-janaka hendry."
Ary, hey, tsy ianao ve no nitoraka bilaogy momba ny fampiantranoana ny atiny manokana? Nefa ireo horonan-tsary roa farany izay niarahan'ny youTubeGoogled?
May 23, 2007 amin'ny 10: 19 AM
Lahatsoratra tsara tarehy Doug. Manan-janaka lahy aho eny an-dalana, ary tsy afaka manantena aho fa ho tonga ray aman-dreny tsara ho azy.
Heveriko koa fa mahafinaritra ny ahafahanao mitazona fifandraisana salama toy izany amin'ny vadinao taloha. Araka ny nolazainao dia natao ho an'ny ankizy izany, ary tena tsy manampy raha miady foana ianao ary milalao ny ankizy toy ny kilalao saina miolakolaka. Nanana namana nitombo niaraka tamin'ny ray aman-dreny toy izany aho, ary tena mampalahelo ny mahita.
May 23, 2007 amin'ny 10: 43 AM
Miarahaba anao Brandon! Efa nanao hadisoana taonina aho teny an-dalana, minoa ahy. Nisy zavatra nolazaiko tamin'ny zanako fa fantatro fa nandratra azy ireo rehefa tezitra aho ary indraindray tsy omeko azy ireo ny saina mendrika. Fa isaky ny mifanalavitra isika dia mifampilaza fa mifankatia - na dia tezitra aza. Ary mamihina… betsaka izahay!
Izaho koa dia nanao ny marina tamin'ny zanako momba ny lesoka vitako ary miala tsiny aho rehefa nanao zavatra tsy nety tamin'izy ireo. Araka izay azoko atao dia avelako izy ireo handray ny fanapahan-kevitr'izy ireo ary avy eo miresaka momba ny vokatr'izany fanapahan-kevitra izany izahay.
Nihomehy ny zanako lahy hoe akaiky tokoa ny fisakaizanay. Miara-miasa be toa ny namany rehetra izahay. Ho an'ny IUPUI dia hipetraka an-trano tokoa izy! Mbola izaho no sefo (amin'izao fotoana izao).
May 23, 2007 ao amin'ny 3: 36 PM
Douglas, tena tsara izany. Misaotra nizara tamintsika rehetra. Mahaliana ny fomba filalaovanareo rehetra ao anaty fiara. Tsara vintana ianareo ankizy manana…… Andriamanitra mitahy !!
May 23, 2007 ao amin'ny 7: 48 PM
Misaotra Doug - Tena manantena ny ho ray aman-dreny aho, saingy miahiahy momba ny fanaovana asa tsara fa tsy manelingelina ny zanako.
Heveriko fa izay lazainao momba ny fahatsoranao amin'izy ireo momba ny lesoka nataonao tamin'ny fiainanao manokana, ary ny famelana azy ireo handray ny fanapahan-keviny manokana dia io no lalana tokony haleha. Misy lesona vitsivitsy izay tsy maintsy ianaranao ho an'ny tenanao fotsiny, na dia sarotra aza izany.